I-KDE iqala kancane? Sola iPulseAudio. [Isixazululo] | Kusuka kuLinux
I-KDE iqala kancane? Sola iPulseAudio. [Isixazululo]
Njengoba ngisebenzise Debian Bengikade ngihudula inkinga encane ngokuqala kwe- KDE lokho, yize bekungeyona inkinga kakhulu (kuwufanele lo msebenzi), bekucasula kancane.
Kuvela ukuthi, ngemuva kokungena ngemvume, i- KDE kodwa, lapho beqala ukulayisha izithonjana kuthileyi, bekumiswe nje ngemuva kwenethiwekhi nebhethri ... Lokhu kwenziwa isikhathi esithile semizuzwana emi-5 kuye kwayi-10.
Inkinga ukuthi, kuze kube yilapho zonke izithonjana zilayishiwe, KDE bekungaqali ukusebenza ngempela. Okusho ukuthi, uma kuleso sikhathi sokuphumula uzame ukufinyelela Imenyu, ayizange isabele.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngibuyisele kabusha I-ArchLinux y KDE iqale ngokushesha okumangazayo. Ngafaka I-Vokoscreen ukwenza ama-Screencast, kepha uhlelo lokusebenza alutholanga imakrofoni yami, ngakho-ke lapho ngihlola ngabona ukuthi ayifakiwe I-PulseAudio.
Ngiyifakile, ngayiqala kabusha futhi I-BOOM !! Futhi inkinga efanayo yokulayishwa kwedeskithophu okuhamba kancane.
Ngakho-ke ngithole ukuthi lapho bekuya khona izibhamu. Ngaqala ukusesha izinkundla ze-Arch futhi ngathola isixazululo, empeleni babili babo.
1 Inketho yokuqala: Khubaza i-PulseAudio.
2 Inketho yesibili: Eyangisebenzela.
Inketho yokuqala: Khubaza i-PulseAudio.
Sithola ifayela /etc/pulse/default.pa ngamalungelo okuphatha:
Sifuna imigqa ethi:
### Layisha ngokuzenzakalela amamojula womshayeli ngokuya ngehardware etholakalayo .ifexists module-udev-detect.so load-module module-udev-detect .else ### Sebenzisa i-static hardware detection module (yezinhlelo ezingenayo ukwesekwa kwe-udev) umthwalo- module module-thola .endif
Futhi siphawula ngabo ngale ndlela:
### Layisha ngokuzenzakalela amamojula omshayeli ngokuya ngehadiweware etholakalayo # .ifexists module-udev-detect.so # module-module module-udev-detect # .else ### Sebenzisa i-static hardware detection module (yezinhlelo ezingenakho ukuxhaswa kwe-udev umthwalo-module module-thola # .endif
Lokhu kuxazulule inkinga, kepha lapho ngiqala iseshini, idivayisi yokubamba ayilayishanga, okungukuthi, imakrofoni. Ngakho-ke ngathola ikhambi lesibili.
Inketho yesibili: Eyangisebenzela.
Kufayela elifanayo (ngaphandle kokuphawula ngemigqa yesixazululo sokuqala), sibheka umugqa othi:
### Ukhokho womculo / ividiyo isakaza lapho ukusakaza kwefoni kusebenza umthwalo-module module-indima-ukhokho
futhi siyakuphawula, ngokuba ngale ndlela:
### Ukhokho womculo / ividiyo isakaza lapho ukusakaza kwefoni kusebenza # umthwalo-module module-indima-ukhokho
Ngemuva kwalokho (yize ngingaqiniseki ukuthi kunesidingo), sigijima:
Futhi yilokho kuphela ..
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-KDE iqala kancane? Sola iPulseAudio. [Isixazululo]
1. Kubonakala kimi ukuthi «futhi siphawula ngakho, ngokuba ngale ndlela:» umyalo we-console
2. yini ngempela ebangela inketho yesibili?
Lapho ngiphawula kulayini (i - '#' phambili) kuba sengathi akubhekwanga kufayela lokumiswa, anginalo ulwazi lokukuchaza ngobuchwepheshe kepha yilokho engikuqondayo.
ngiyabonga, kepha bengisho ukuthi umsebenzi we-pulseaudio uyakhutshazwa kulolo shintsho
I-Pulse idala inkinga enkulu kakhulu. Ngihlale ne-ALSA kuphela esebenza kahle kakhulu futhi ukuphela kwendlela u-Ardor angazibangeli ngayo izinkinga. Naphezu kwayo yonke imihlahlandlela, ayisebenzi kahle nge-pulse ngoba iyabulala nge-jack
Singabantu. I-Pulse Audio iyisihogo esimayelana nalokhu. Into enhle ngisebenzisa i-ALSA.
ngiyabonga nge-elav yedatha. Ngizoyivivinya ku-Debian. Kuyiqiniso ukuthi leyo nkinga yokubambezeleka ekuqaleni ... okungenani i-Arch nginayo ne-ALSA hhayi inkinga.
Okuthile okungikhathaza ngedeskithophu ye-KDE ukuqala okuhamba kancane, kuthatha cishe iminithi elilodwa ukusebenza ku-1%, noma ukulayishwa kwamawindi kuhamba kancane.
Ukucaciswa: khubaza zonke izinto ezingadingekile kepha kusese kufudu oluqala i-KDE
Enye yalezo zinkezo ezincane ezinikezwa abanye amaphrojekthi.
Ngiyethemba futhi ngokuzayo yonke into izohambisana kakhulu, kepha ngalezo zinsuku, uma i-KDE isetshenziswa, i-ALSA + Phonon VLC iyona ehamba phambili (Yize i-equalizer ilahleka ku-amarok nakwabanye abadlali.)
Impela i-VLC iyona ehamba phambili kuleyo ndaba.
Ithiphu enhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, sengivele ngisebenzisa i-ALSA esikhundleni sePulse Audio ngenxa yezinkinga ozishilo.
I-Alsa iyindlela engcono kakhulu, ngaphandle kokuthi usebenzise i-usb noma i-headphone ye-bluetooth ... futhi yilokho kuphela.
Into enhle ngisebenzisa ama-headphone ami anentambo. BA dum tss!
Hhayi-ke, ngixakeke kanjani ukusebenzisa umsindo we-pulse kodwa unginikeze izinkinga, awungivumanga ukuthi ngidlale ama-audi amaningi ngasikhathi sinye futhi angazi ukuthi yini enye, yanginika amaphutha kumavidiyo we-youtube, ngaya ekushayeleni umsindo futhi ngayixazulula angizange ngizwe kubambezeleka ekulayisheni, kuhle ukuthi uma ngisebenzisa i-xfce esikhundleni se-kde.
Indlela elula yokufinyelela kuleyo nkinga yokusebenza ukwengeza i-veromix plasmoid utility (noma ku-systray)
I-Veromix? Ake sibone ukuthi nginesikhathi sokufaka.
I-Veromix? Kuyadliwa lokho?
«I-Veromix ingumxube wesiphakeli somsindo sePulseaudio. »
Kulabo abasebenzisa iDebian, benginenkinga efanayo, kepha ngiyilungisile ngalokhu:
nano / etc / default / pulseaudio // Shintsha i- "0" ibe yi- "1"
Yebo, kepha angenzi lutho ngokwenza iPulseAudio ingasebenzi, ngoba ngilahlekelwa ithuba lokusebenzisa i-mic 🙁
Okungithatha kuze kube phakade ukuyivula yi-GIMP!
I-tip elav, vele ubeke inketho ekusebenzele ukugwema umsindo kokuthunyelwe.
Ngiyabonga mlingani wami, kepha kufanele ngichaze kancane kwakho konke, ngoba abantu abaningi abafuna into efanayo bangathola isixazululo sokuqala futhi ngeke sibasize 😀
Sawubona Elav .. Isixazululo sakho sisebenza ngempela :). Ngenkathi ngisebenzisa i-KDE ngangihlala nginenkinga yokwenza ukufakwa ngesandla ngokunembile ngenxa yale nkinga.Ngiqale ngafaka uhlelo oluncane futhi ukusuka lapho ngafaka i-alsa-utils package, xorg kanye nemvelo .. kufanele ngithi ngikhathele kancane kusuka ku-Debian bese ngishintshela ku-Arch njengoba nje wenze, kepha ekugcineni angitholanga lutho oluthakazelisa ngempela e-Arch. Ngiphinde ngadlula ngivela kwimvelo ye-KDE ngoba iyathandeka kimi, yebo, kepha ayikhiqizi kakhulu. Ngaphandle kwalokho, ngichitha amamayela negundane :)
Ekugcineni, ngakhetha i-Fedora kuwo wonke ama-PC wami naku-CentOS kuwo womabili amaseva wangasese nawenkampani. Ku-Fedora ngikhetha imvelo ye-XFCE futhi amaseva awana-X kunjalo:
Ngokuqondene nelayisense le-Fedora shame, njengoba kushiwo ezinkundleni eziningi kuwebhu, kubonakala kungubuwula kimi ngoba ilayisense efanayo iphethwe yi-openSUSE noma i-SLES phakathi kwamanye ama-distros amaningi. Kunengqondo ukuthi uma iRed Hat neNovel kuyizinkampani ezinenhloso yezomnotho ezinze eNyakatho Melika, kuzofanele zilandele imithetho esebenzayo kuleliya lizwe nokuningi uma le migomo ibekwa nguhulumeni kuzo zonke izinkampani zaseMelika.
Noma kunjalo .. Ngizizwa ngikhululeke kakhulu kuFedora / CentOS naku-XFCE futhi ngokweqiniso angicabangi ukuthi kunemvelo ekhiqiza kakhulu kuneXFCE: D .. Futhi ukwesekwa okuvela kuRed Hat kubonisa.
Imibuzo embalwa u-Elav ..
Kungani ufake kabusha? Akungcono yini ukusebenzisa i-distro engadingi ukubuyiselwa? Kungakho ngisuse izandla zami kuma-rolling release distro's ..
U- @elav une-Workstation ene-Debian, kanye ne-netbook ene-Arch. Cishe ubuyisele kabusha i-Arch ngenxa yesiphazamisi esingu-8.
Impela ^ _ ^
Futhi ngendlela, angizange ngidinge ukufaka kabusha i-Debian yami ngoba ngiyifakile kahle ukuze ngingaguquli kabusha i-PC yami (engiyenza kanye ngonyaka ngeWindows).
Hahahaha, impela ukugoqeka yilokho okungadingi ukufakwa kabusha ngokungafani nokukhululwa komjikelezo wangaphambi komlando, hahahaha.
Yebo, nge-RHEL / CentOS, ngikuthola kulula futhi kusebenza ukusebenzisa i-CentOS kune-RHEL ngenxa yezindleko (ngokweqiniso kumahhala, kepha empeleni, kushibhile kakhulu kunokuxhaswa kweRed Hat).
Ngasohlangothini lwe-Debian / Ubuntu Server, iqiniso ukuthi ngincike ku-Debian, ngoba ngibe nokuhlangenwe nakho okungcono nge-Debian kune-Ubuntu Server, ikakhulukazi amaphakheji. Ngamafuphi, ukuthi inkampani ebucayi ikunikeza i-repo esimweni esihle kakhulu ngokushintshana ngokubhaliselwe okungabizi kakhulu kuyisizathu esanele sokungakhethi iWindows Server 2012.
Impela: D ..
Ngeshwa lezo zinhlobo zezinkinga yizo ezigcina abantu bekude neLinux.
Futhi-ke bathi i-KDE imvelo esezingeni eliphakeme kunayo yonke futhi idlula i-Aqua yeMac ne-Aero yeWindows
Kepha uma lokhu kungeyona inkinga nge-KDE kepha ngomsindo we-pulse.
Kufisa kangakanani ukwazi ukuthi iPulseaudio kufanele isolwe ngobubi obuningi kangaka… Imithetho ye-ALSA 🙂
UMarco Martinez kusho
Kuthiwani nge-elav, ngiphawula kuphela ngoba ngithole imbangela yangempela yenkinga.
Ngaphakathi kokukhetha kwesibili, qaphela ukuthi weluleka ukumisa ukulayishwa kwemodyuli, empeleni lokhu akunamthelela enkingeni, okuyixazulula ngempela, njengoba ushilo, qamba kabusha ifayela "pulseaudio.desktop".
Lapho iphakethe le-pulseaudio lifakiwe, likhiqiza amafayela ama-2 kumkhombandlela we / etc / xdg / autostart, elinye libizwa nge- "pulseaudio.desktop" nelinye "pulseaudio-kde.desktop", ukuba nalawa mafayela ama-2 enza ukubambezeleka lapho kulayishwa ideskithophu kubangelwe ngoba uhlelo luzama ukuqala kabili.
Ekugcineni, lapho kushintshwa igama lefayela le- "pulseaudio.desktop", indlela ishiywa mahhala ukuze iqale kuphela kufayela le- "pulseaudio-kde.desktop" ngakho-ke akusekho ukubambezeleka lapho kulayishwa ideskithophu.
Phendula uMarco Martínez
Ngiyabonga uMarco no-elav ngezeluleko. Kimi nge-KDE 4.8 ku-Debian Wheezy, okwenzeka kimi kumakhompyutha amaningi ukuthi nginezinkinga nge-phonon-backend-vlc, ngabika i-bug ku-debian eyadala ukuthi imodyuli ye-KDE iphahlazeke njalo lapho uhlelo luqala, kufanele ngenqubo yokulungisa, ngakho-ke okwamanje nginamathela ku-phonon-backend-gstreamer okuyinto emnandi.
Ngakolunye uhlangothi, okushoyo kuyenzeka nakimi, ukuthi kwesinye isikhathi ideskithophu ilenga ngoba ayiqedi ukulayisha isithonjana sevolumu futhi kufanele ngiqale kabusha ukuze ngikwazi ukusebenzisa imvelo.
Ngikwenzile okushiwo nguMarcos, ngiyethemba ukuthi kuyangisebenzela uma ngingasebenzisi isixazululo se-elav.
Ngiyabonga kakhulu, sihalalisela bonke.
Nanku umbiko wesiphazamisi engiwenzile, bonke labo abanezinkinga nge-knotify njalo lapho uhlelo luqala ngikweluleka ukuthi uyifunde. Ngamafuphi, kufanele ufake i-phonon-backend-vlc bese uyikhetha kokuncamelayo kwe-KDE.
Uxolo, okufanele kufakwe i-phonon-backend-gstreamer, eyodwa evela ku-vlc iyona ebangela ukuthi i-knotify yehluleke. Ukugcizelela ukuthi lokhu kungenzeka noma kungenzeki kuDebian Wheezy, kuya ngeqembu.
Uxolo ukulimaza ukuthinteka kepha kini nonke enikhuluma ngokuhluphayo iPulseAudio: ANINAWO UMDLALO WOKUBHEKA LOKHO OKHULUMAYO NGAKHO:
1. I-ALSA ibisebenza ngaleso sikhathi kepha namuhla ayikwazi ukuphatha amadivayisi namasiginali alalelwayo njengoba kwenza i-PA, yingakho kudalwe okwakamuva.
2. I-PulseAudio isebenza njenge-LAMER LOKUPHAKATHI phakathi kwe-ALSA nayo yonke isoftware enikeza umhlaba omusha wamathuba wohlelo kanye nezinhlelo zokusebenza.
3. Iqiniso lokuthi lisenezinkinga kungenxa yokuthi liyi-software esencane kakhulu ukuba ibaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kwayo nokuthi ihlolwe ngamandla ngokusatshalaliswa kusukela ezinhlotsheni zayo ze-beta kusukela * kuyiyona kuphela indlela * yokushesha iguqula ukuthuthukiswa kohlelo olukhulu njengePulseAudio ngesikhathi esifushane kangaka. Ngezinye izikhathi ukwenza okuthile okufana nePulseAudio nokukuletha esigabeni esizinzile lapho kungatholakali zinkinga kwakungathatha kalula iminyaka eyi-10 noma eyi-15. Umlingo we-F / LOSS kanye neqiniso lokuthi ama-distros amaningi awusebenzise kusenesikhathi kusho ukuthi namuhla sijabulela isistimu yomsindo yesikhathi esizayo.
4. Uma i-PA yehluleka ku-distro yakho iphutha lingelakho noma livela ku-HIS, aka layer 8. UChakra, ngokwesibonelo usebenzisa i-PulseAudio ngoba izinhlelo eziningi zidinga i-PA njengokuncika ekuhlanganiseni futhi kunzima kakhulu ukuthola umuntu onezinkinga. Ngokwami ​​- iminwe iwele - angikaze ngibe nenkinga ne-PA eChakra kuze kube manje.
5. "umthwalo-module module-indima-ukhokho" kungenye yezimpawu ezenza iPulseAudio ibe yisistimu esezansi yesikhathi esizayo: imodyuli iphethe ukuphatha ukusakazwa okuhlukile komsindo kusuka kuzinhlelo zokusebenza kanye nohlelo nokuzi-oda ngokokubaluleka kwazo. ISIBONELO: silalele umculo noma sibukele i-movie futhi sithola ucingo ngeSkype noma i-Hangout: ngalesi sigaba se- «role-cork» esilayishiwe, iPulseAudio iyodwa ezophatha ukwehlisa ivolumu yabo bonke abanye abathumeli bomsindo abathi ziyasebenza kulo mzuzu ukuze sikwazi ukukhuluma kahle ngohlelo lapho sithola khona ucingo.
I-cork-cork ingalungiswa, yona, ukuze yehlise ivolumu yezinhlelo zokusebenza zangemuva ziye ezingeni eliphansi (njengokusakazwa komsindo okubushelelezi ngemuva) noma ukuthulisa ngokuphelele ukusakazwa komsindo wangemuva.
6. Uma kwenzeka unenkinga nge-PA, imvamisa kwanele ukususa amafayela wesikhashana ~ / .cache / event-sound-cache * kanye ~ / .config / pulse / *, bulala iseva yomsindo bese uyiqala kabusha (i-Wincrap Abasebenzisi be-savvy bangavele baqale phansi).
Ngaphambi kokuluma abathuthukisi be-PA, thatha isikhathi sezingxabano zomqondo nezobuchwepheshe zokuthi kungani isidingo sokuqaliswa kwesimanje kweseva yomsindo, imininingwane isesidlangalaleni futhi ifinyeleleka ngokukhululekile futhi ukuzazisa wena ngaphambi kokukhuluma akubalulekile. njengamanje.
1. Kuliqiniso, kepha kukhona labo abangakudingi lokho kuphathwa okuphezulu kwezimpawu.
2. Isendlalelo ngasinye esingezelelwe sandisa ngokwengeziwe amaphuzu okwehluleka, hhayi sonke esizimisele ukukwenza lokho ukuthola ezinye izindlela ezintsha.
3. Ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi ukwabiwa kuvivinye ubuchwepheshe obusha ukuze kubuthuthukise, kepha umsebenzisi ongesiye umhloli, ongasoze athumela umbiko owodwa angakhetha ukungazisebenzisi.
4. Uyakhohlwa ukuthi kunezingqimba eziningi ngezansi, i-hardware ingenye yazo, akufani ukufaka ikhadi lomsindo nomshayeli ojwayelekile ngama-dll ama-5. leyo yeXonar, esebenza ne-ALSA kuphela cishe ngokuzenzakalela, kepha uma ufaka umsindo wokucindezela, umsebenzisi ongathuthukile uphonsa ikhibhodi phansi lapho ethola ukuthi amafayela kufanele aguqulwe ukukhombisa ukuthi yiliphi ikhadi elizokuba esetshenzisiwe, zingaki iziteshi, amazinga esiteshi ngasinye ngisho nesilinganiso sesampula.
5. Ngokwami, lezi zinhlobo zezinketho zibonakala zingenangqondo kimi, kepha hheyi, kumakhompyutha ami okuwukuphela kwento ezwakala umculo namavidiyo, zonke izinhlelo zokusebenza (kufaka phakathi izaziso nemisindo yohlelo) zithulisiwe noma zikhutshaziwe, ngakho konke okunye enginakho ifoni .
6. Kulula kodwa akudingekile uma ungasebenzisi i-PA.
Kunezinhlobo eziningi zabasebenzisi, okuyisisekelo, ababuka amavidiyo ku-YouTube, balalela ama-mp3s ku-96 kbps futhi uma befuna ukuthi izikhulumi zizwakale badonsa ikhebula lamahedfoni ukuzinqamula, Ochwepheshe, abenza futhi bahlehlise ukuhlela amafayela we-multitrack anezimfanelo ezinhle. Abathandi bobuchwepheshe obusha, abaxhuma amagajethi ayinkulungwane kwikhompyutha futhi bathanda ukukhuluma ngesahluko sakamuva somdlalo wezihlalo zobukhosi nabangane abayi-16 ngasikhathi sinye ku-skype-Hangouts-facebook…. noma okufanayo.
Ngithanda kakhulu ifilosofi ye-KISS, nge-ALSA + Phonon VLC (Ukucindezela ikhwalithi yamafayela ngenani elincane lezinhlelo) neKmix yokulawula amazinga, ngifeza izisekelo ngaphandle kwezinkinga.
Okuthuthukile, umsindo uphuma nge-optical noma nge-USB ku-DAC futhi ngivumela ochwepheshe bemisindo ukuthi bayiphathe.
Azikho izingqimba eziphakathi ezingadingekile.